News Collection: २०१० मा हलिउड सेलीब्रेटीहरुको लभ, सेक्स र धोका
२०१० मा हलिउड सेलीब्रेटीहरुको लभ, सेक्स र धोका
१२ घण्टासम्म सेक्स ?
चर्चित चलचित्र 'ट्वीलाइट' श्रृंखलाका प्रसिद्ध जोडी १२ घण्टासम्म यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको खबर यसै वर्ष सुनियो । यौनक्रीडालाई कसरी आकर्षक बनाउने भन्ने कुरामा अभिनेता रोबर्ट पेटिन्सन र अभिनेत्री क्रिस्टिन स्टेवार्ड तल्लीन रहे । अमेरिकी पत्रिका डेलि टेलिग्राफका अनुसार निर्माणाधीन उक्त चलचित्रमा यो जोडीको यौनक्रीडा हेर्न पाइनेछ र त्यसको छायांकनका क्रममा उनीहरू बारम्बार उत्तेजनामा आइरहेका थिए । निर्देशकले चुम्बन गर्न अह्राउँदा उनीहरू मग्न भएर अधरपान गरिरहेका हुन्थे ।
यी दुईको आग्रहमा बारम्बार हरेक सटको रिटेक लिनुपथ्र्यो, किनभने उनीहरू आफूले दिएको सट यर्थात् देखियोस् भन्ने चाहन्थे । युवाहरूमा हिट यो जोडीमध्ये २० वर्षीय अभिनेता पेटिन्सनले एउटा पत्रिकालाई भनेका छन्- 'त्यो दृश्य दिँदा हामीले आफ्नो होस हराइसकेका थियौ र सुटिङ भैरहेको छ भन्ने पनि बिर्सिएका थियौं ।' वर्ष २०१० मा यो जोडीको रोमान्सको चर्चा दिनानुदिन हट हुँदै गएको छ ।
हलिउड आफैंमा 'गसिप' नगरी हो । विश्वको नम्बर एक उद्योग रहेको सहर लसएञ्जलसमा हजारौं चलचित्रकर्मीको बसोबास छ, जहाँबाट चलचित्र निर्माणसँग सम्बन्धित खबरहरू मात्र होइन, 'गसिप र स्क्यानडल'हरू पनि आउँछन् । कुन स्टारले कतिबेला के गरे ? भन्ने कुरा जान्न हलिउडका गसिपहरूको वेबसाइट चहार्दा हजारौं खबर पढ्न पाइन्छ । सेक्स, सम्बन्ध र घटनालाई मात्र सँगाल्ने हो भने हरेक एक-दुई घण्टामा हलिउडका 'हावा खबर' पढ्न पाइन्छ । वर्ष २०१० मा पनि हलिउडका चर्चित अनुहारहरूले गरेका हावादारी क्रियाकलाप, चर्चामा आउने नियोजित प्रोपोगान्डा तथा समाजमा प्रभाव पार्ने खबरहरू आइरहे ।
पछिल्लो खबर जसलाई अमेरिकी पत्रपत्रिकाले 'पेज थ्री'मा मज्जाले समेटेका थिए- 'दिवंगत अभिनेता पेटि्रक स्वेजका प्रसशंसकहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनलाई श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा विश्व कीर्तिमान कायम गरेछन् । पेटको क्यान्सरका कारण गत वर्ष निधन भएपछि स्वेजको यो वर्ष फेसबुकमा यति धेरै कमेन्ट भयो कि त्यसले विश्व कीर्तिमान कायम गर्‍यो ।
चलचित्र 'वाल स्टि्रट'का कारण विख्यात अभिनेता माइकल डगलस पनि क्यान्सरबाट पीडित छन् । घाँटीको क्यान्सरका कारण आफूभन्दा २५ वर्ष कान्छी अमेरिकी अभिनेत्री क्याथरिन जेटा जोन्सका पति यी बुजुर्ग अभिनेता किमो थेरापीबाट केही स्वस्थ भएपछि फेरि अभिनयको संसारमा प्रवेश गर्दैछन् । वर्ष २०११ मा उनले अभिनय गरेको कुनै चलचित्र सार्वजनिक भए आश्चर्य मान्नु पर्दैन यद्यपि उनको अभिनयमा पुनरागमन भने एउटा भिडियोबाट हुने भएको छ ।
विचरा जोनी डिप, वर्ष २०१० मा उनले जे पाए, त्यो गुमाए । पिपुल पत्रिकाले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने 'विश्वका सर्वाधिक आकर्षक पुरुष'को उपाधि उनले पाए केही स्थान तल खस्केको रेटिङसहित, त्यसपछि पराजित भएको महसुस गरिरहेका 'पाइरेट्स अफ क्याराबियन'का यी अभिनेता आफ्नो उत्साह सेलाएको कुरा गरिरहेका छन् ।
मार्सल आर्ट्सका ज्ञाता अभिनेता ज्याकी चाङले प्रशंसक बढाउने गतिलो उपाय फुराए । उनी आफ्नो नाममा एउटा संग्रहालय खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले संग्रहालयको नाम पनि राखिसकेका छन्- 'जैकी चाङ्स वल्र्ड' । जहाँ चाङले आफूले पाएका उपहार, पुरस्कार, चलचित्रमा लगाएका पहिरन, कारदेखि चियाको कपसम्म संग्रहित गर्ने भएका छन् । संग्रहालयमा प्रशंसकले उनलाई दिएका सामानहरू पनि रहनेछन् । आशा गरौं, वर्ष २०११ मा त्यो संग्रहालय सञ्चालनमा आउनेछ ।
वर्ष २०१० मा अभिनेता मेल गिब्सनले 'हिप्नोटिज्म'को प्रशिक्षण लिए । अरूलाई सम्मोहन गर्ने कला अर्थात् हिप्नोटिज्म ५४ वर्षीय यी अभिनेताले किन सिके ? भन्ने कुराको जवाफ भने उनले दिएका छैनन् ।
केही सनसनी पूर्ण 'सेक्सी खबर तथा प्रोपोगन्डाहरू'
ब्रिटनीको सेक्स टेप
भिभिड इन्टरनेसनल कम्पनीले ब्रिटनीको सेक्स टेप सार्वजनिक गर्ने अधिकार पाएको छ । सेक्स टेपका तस्बिरहरू भने यही डिसेम्बर महिनामा इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक भैसकेका छन् । यही क्रिसमसको उपहारस्वरूप भिभिड इन्टरनेसनलले आफ्नो वेबसाइटबाट ब्रिटनीको सेक्स टेप सार्वजनिक गर्‍यो । टेप सार्वजनिक हुने भएपछि अभिनेत्री डेमी मूरका पति एस्टन कचरका वकिल त्यसलाई सार्वजनिक हुन नदिने दौडधूपमा लागेका थिए, तर उनको परिश्रम खेर गयो ।
उनको नाम ब्रिटनी हो, थर स्पेयर्स होइन । २१ वर्षीया ब्रिटनी जोन्सले ४७ वर्षीया अभिनेत्री डेमी मुरको गृहस्थ जीवन झन्डै भताभुङ्ग पारेकी थिइन् । आफूभन्दा १५ वर्ष कान्छा पति एस्टन कचरलाई सम्हाल्न अप्ठेरो परिरहेका बेला मुरको घरै बर्बाद हुने गरी ब्रिटनीको बयान आयो- 'मलाई कचरले घरमा बोलाएर सोफामा यौनसम्बन्ध राखे ।' विश्वप्रसिद्ध अभिनेत्रीका पति भएर चर्चामा आइरहेका कचरले मुर छायांकनका क्रममा सहरबाट बाहिर गएको मौकामा बोलाएको बि्रट्नीको दाबी छ । यहाँसम्म कि कचरको यौनक्रियाकलापबाट आफू सन्तुष्ट भएको पनि उनले बताएकी छिन् । ब्रिट्नीले भनेकी छिन्- 'एस्टन एक माया गर्न जान्ने प्रेमी हुन् ।' उनको बयानपछि कचरको सातो गयो र हत्तपत्त उनले वकिलको सहयोग लिए । वकिलले पनि कचरको बयान निकाले- 'यो ती मध्यमवर्गीय युवतीको कचरलाई बदनाम गरेर पैसा कमाउने चाल हो ।' जे भए पनि यो घटना वर्ष २०१० को सर्वाधिक चर्चा पाएको स्क्याडल बन्यो ।
अर्कातर्फ ब्रिट्नीको सेक्स टेपमा बि्रट्नी मात्र छिन् । एउटा पलङमाथि बसेर बिस्तारै उनी पूर्णनग्न हुन्छिन् । ब्रिट्नी मात्र भएको सेक्सटेपलाई सार्वजनिक हुन कचरका वकिलले गरेको कसरतले गर्दा मुरप्रति शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । यो प्रकरणले कस्तो रूप लिने हो, वर्ष २०११ मै थाहा हुनेछ ।
केही ब्रेकअप, म्यारिज र इन्गेज्मेन्ट
५१ विवाह, ३२ इन्गेज्मेन्ट
स्क्यान्डल र सेक्सका कुराभन्दा रोचक कुरा के छ भने वर्ष २०१०मा सेलिब्रेटीमा नाम चलेका अनुहारहरूले विवाह र इन्गेज्मेन्ट पनि गरेका छन् । यो वर्षभरि ५१ सेलिब्रेटी जोडीले विवाह गरेका छन् भने ३२ जोडीको इन्गेज्मेन्ट भएको छ । यी सबैको सूची प्रकाशन गर्ने हो भने पत्रिकाको पाना नै भरिन्छ होला । विवाह गर्नेहरूमा ह्यारिसन फोर्ड, हल्क होगनजस्ता भेटरानहरू पनि छन् । विवाह गर्ने अभिनेत्रीहरूमा मेगान फोक्स, पेनोलप क्रुजजस्ता चर्चित मुहार पनि छन् अनि इन्गेज्मेन्ट गर्नेहरूमा जेसिका सिम्पसन तथा टाइटानिकको शीर्ष गीतकी गायिका शाइना ट्वाइन पनि छन् । यीमध्ये केहीको विवाह र इन्गेज्मेन्ट कतिऔं हो भनेर सोध्नु बेकार छ, किनभने सेलिब्रेटीह रूको जीवनमा त्यस्तो भैरहन्छ ।
स्कारलेट जोहान्सन र हेयान रेनोल्डस, कोर्टनी कोक्स र डेभिट अक्र्वेटे, जेनी म्याकेथी र जिम क्यारी, रिज विदरस्पुन र जेक गेलेनाहाल, मेल गिब्सन र ओक्साना गि्रगोरीभा, जेसी जेम्स र सान्द्रा बुलक, चार्ली सिन र ब्रुक मुलर आदि ।
अश्लील चलचित्र 'इनर्फन'का निर्माताहरूले वर्ष २०१० को मध्यतिर चलेको एउटा हल्लाको खण्डन गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टबाट अभिनेत्री लिंडसे लो हानलाई हटाएको कुरा झूटो भएको खण्डनमा उल्लेख छ । 'इनर्फन'का निर्माताको आगामी प्रोजेक्टमा पनि थुप्रै अश्लील दृश्य रहने छन् । वर्ष २०११ मा निर्माण थालिने चलचित्रमा अभिनय गर्नुपूर्व विभिन्न प्रोपोगन्डाबाट चर्चामा आइरहने २४ वर्षीया यी गायिका, मोडल तथा अभिनेत्रीले वर्ष २०१० को एक दिन चर्चामा आउने नौलो उपाय अपनाइन् । टपलेस अर्थात् आफ्नो वक्षस्थल देखाउँदै उनी सडकमा देखा परिन् । उनले भित्री पहिरन नलगाई, मात्र एउटा पारदर्शी पातलो झिल्लीजस्तो टिसर्ट लगाएकी थिइन् । उनको त्यो कार्यले लसएञ्जलसको सडकमा ट्राफिक जाम नै यो । अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाएकोमा जेल पुगिसेकेकी लिंडसेले दुई वर्षदेखि अभिनय गर्ने अवसर भने पाएकी छैनन् ।